चन्दलाई प्रतिबन्ध घोषणासँगै सुरक्षा सतर्कता बढाइयो- समाचार - कान्तिपुर समाचार
चन्दलाई प्रतिबन्ध घोषणासँगै सुरक्षा सतर्कता बढाइयो
चैत्र १, २०७५ जनकराज सापकोटा
काठमाडौँ — सरकारले प्रतिबन्ध लगाएको विरोधमा नेक्रवित्रम चन्द नेतृत्वको नेकपाले गरेको देशव्यापी बन्दको बढी प्रभाव शैक्षिक क्षेत्रमा परेको छ । प्रहरी प्रधान कार्यालयले सातै प्रदेशबाट संकलन गरेको रिपोर्टले शैक्षिक संस्थान सबैभन्दा धेरै प्रभावित बनेको देखाएको छ । स्कर्टिङ र राजमार्ग सुरक्षा गस्ती बढाइए पनि लामो दूरीका सवारीसाधन प्रभावित बनेको प्रहरीले जनाएको छ ।
महानगरीय प्रहरी कार्यालयका अनुसार काठमाडौं उपत्यकाका तीनै जिल्लाको अवस्था सामान्य रहेपनि पठनपाठन भने पूर्ण रूपमा प्रभावित भयो । सबैजसो प्रदेशका छोटो दूरीका सवारीसाधन सञ्चालनमा आए पनि लामो दूरीका सवारी सञ्चालन नभएको प्रहरीले जनाएको छ ।
प्रदेश प्रहरी कार्यालयबाट प्रहरी प्रधान कार्यालयमा आएको रिपोर्टअनुसार प्रदेश १ को इलामबाट मात्रै लामो दूरीका सवारीसाधन चलेका थिए । प्रदेश २ बाट लामो दूरीका सवारीसाधन थोरै चले भने गण्डकी प्रदेशको कास्कीबाट काठमाडौंका लागि सवारी छुटे पनि अन्य जिल्लाबाट चलेनन् । प्रदेश ५, ६ र कर्णाली प्रदेशबाट पनि लामो दूरीका सवारीसाधन चलेनन् । बन्दको सबैभन्दा धेरै प्रभाव प्रदेश ५ र सुदूरपश्चिम प्रदेशको कञ्चनपुरमा पर्‍यो । त्यहाँ लामो र छोटो दूरीका दुवै सवारीसाधन ठप्प रहे । देशैभरि बजार र कलकारखाना खुला रहेको र सार्वजनिक गतिविधि सामान्य प्रभावित बनेको प्रहरीले जनाएको छ ।
नेकपाले बन्द सफल पार्न देशैभरि विस्फोट र आगजनी प्रयास गरेको प्रहरीको रिपोर्ट छ । प्रहरी प्रधान कार्यालयका अनुसार बिहीबार साँझसम्म कैलाली, कास्की, सिन्धुपाल्चोक, रौतहट, जुम्ला, स्याङजा, मकवानपुर, रुकुम पूर्व, बाग्लुङ, बाजुरा र गोर्खामा विस्फोटक पदार्थ भेटिएको थियो । कैयौं ठाउँमा नक्कली बम राखेर आतंक सिर्जना गरेको पाइएको छ ।
नेकपाका कार्यकर्ताले कैलालीमा बसमाथि आगजनी गरेको तथा कपिलवस्तु, नवलपरासी र मकवानपुरमा ट्रकमा क्षति पुर्‍याएका छन् । प्रहरीले बन्द गराउने काममा संग्लन रहेको भन्दै ४ जनालाई पक्राउ गरेको छ ।
सरकारले चन्द नेतृत्वको नेकपाका गतिविधि प्रतिबन्धित घोषणा गरेसँगै प्रहरीले देशव्यापी सुरक्षा सतर्कता बढाएको छ । प्रहरी स्रोतका अनुसार दुर्गम भेगका प्रहरीचौकीमा आक्रमण हुन सक्ने भन्दै प्रहरीले सतर्क रहन निर्देशन दिएको छ । त्यस्तै, राजधानी र देशका सबैजसो मुख्य सहरमा गस्ती, चेकजाँच र प्रहरी परिचालन बढाइएको छ ।
प्रहरी प्रवक्ता उत्तमराज सुवेदीका अनुसार सादा पोसाकका प्रहरीको परिचालन बढाइएको छ भने सूचना संकलनलाई तीव्रता दिइएको छ । प्रहरीले चन्द समूह सम्बद्धहरूको सूची तयार पार्ने, प्रत्यक्ष संग्लनलाई पक्राउ गर्ने र सदाशय राख्नेमाथि निगरानी गर्ने नीति लिएको छ ।
राजधानी कम प्रभावित
महानगरीय प्रहरी कार्यालयले उपत्यकाको सुरक्षा अवस्था सामान्य रहेको र बन्दले प्रभावित नभएको जनाएको छ । कार्यालयका प्रवक्ता एसएसपी श्याम ज्ञवालीका अनुसार संवेदनशील स्थानमा निगरानी, नियमित जाँच र सरप्राइज जाँच सुरु गरिएको र गस्ती बढाइएको बताए । उनले भने, ‘काठमाडौं छिर्ने र बाहिरिने नाकामा जाँच र सादा पोसाकका प्रहरी परिचालन बढाइएको छ ।’
प्रकाशित : चैत्र १, २०७५ १०:३२
जीवनशैली नसुधार्दा बिग्रन्छ मिर्गौला
चैत्र १, २०७५ अतुल मिश्र
काठमाडौँ — सबैलाई जानकारी छ, उपयुक्त मात्रामा पानी खानुपर्छ, मर्निङ वाक गर्नुपर्छ, चुरोट, खैनी, मदिरा खानु हुन्न, सकेसम्म नियमित स्वास्थ्य जाँच गराउनुपर्छ, स्वस्थकर खानपानसँगै सकारात्मक जीवनशैली अँगाल्नुपर्छ । यस्तो जानकारी हुँदाहुँदै धेरैको दैनिक कार्यशैली भने उल्टो छ ।
यही उल्टो गराइले मिर्गौला रोगीको संख्या बढिरहेको छ । राष्ट्रिय मिर्गौला उपचार केन्द्रका निर्देशक डा. ऋषि काफले भन्छन्, ‘ज्ञान छ तर व्यवहारमा उत्रिएको छैन, यो बढदो मिर्गौला रोगको कारक हो ।’
विभिन्न अध्ययनले नेफालमा करिब ३० लाख व्यक्तिलाई मिर्गौलाको समस्या रहेको देखाएका छन् । अध्ययनअनुसार यसमध्ये ३ लाख जना रगतमा त्रिएटिनिनको मात्रा बढी भए पनि आफूलाई स्वस्थ ठानिरहेकाहरू छन् । यो ३ लाखमा ३० हजारजतिको मिर्गौला नराम्रोसँग बिग्रिएर पुन: कार्यक्षमता फर्काउन नसकिने स्थितिमा छ ।
यसमध्ये बर्सेनि ३ हजार जनाको मिर्गौला फेल भइरहेको छ । डा. काफलेका अनुसार हाल करिब ४ हजार ५ सय जना डायलासिस गराएर बसेका छन् ।
मुलुकमा हाल मधुमेह र उच्च रक्तचापका रोगीमा भइरहेको वृद्घिले समेत मिर्गौला रोगीको संख्या बढ्दो रहेको त्रिवि शिक्षण अस्पताल, नेफ्रोलजी तथा प्रत्यारोपण चिकित्सा विभागका मिर्गौला रोग र प्रत्यारोपण विशेषज्ञ प्रमुख प्रा.डा. दिव्यासिंह शाह बताउँछिन् । उच्च रक्तचापले मुटुलाई मात्रै होइन, मिर्गौलालाई समेत छुन्छ । मिर्गौला रोगले पनि रक्तचाप बढाउँछ । उच्च रक्तचाप र मिर्गौला रोग एकअर्काबाट प्रभावित हुने गरेका छन् । कुनै व्यक्तिलाई कम उमेरमै उच्च रक्तचापको समस्या छ भने मिर्गौला प्रभावित हुने जोखिम बढ्छ ।
‘मधुमेहको समयमै पहिचान र नियन्त्रण भएन भने मिर्गौला र आँखामा समस्या देखापर्छ,’ डा. साह भन्छिन्, ‘मधुमेह ३०(४० वर्षमै देखिनु र वयस्क, युवामा समेत उच्च रक्तचाप देखिनु मिर्गौलाका लागि जोखिम हो ।’
अस्वस्थकर खानपान, मदिरा, खैनी, चुरोटको अत्यधिक उपयोग, सहरीकरण, व्यायाम/शारीरिक सक्रियताको कमी, तनावमा अत्यधिक वृद्घि, अस्वस्थकर जीवनशैलीलगायत कारणले मिर्गौला रोगको जोखिम बढ्दो छ । ‘कति खाने, कहाँ खाने, के खाने ठेगान छैन, भद्रगोल किसिमले खाइरहेका छन्,’ डा. काफ्ले भन्छन्, ‘खाद्यपदार्थ, तरकारी, फलफूल आदिमा विषादी, रासायनिक मल आदिको अत्यधिक उपयोगले मिर्गौलालाई हानि गरिरहेको छ ।’ विशेषज्ञहरूका अनुसार मदिराको अत्यधिक उपयोगले समेत नेपालीको मिर्गौला प्रभावित भइरहेको उनले औंल्याए । ‘समयमै रोग पत्ता लागे औषधि गरेर मिर्गौलालाई थप बिग्रनबाट जोगाउन सकिन्छ,’ डा. शाह भन्छिन् ।
प्रकाशित : चैत्र १, २०७५ १०:२८